चुरा लगाउँदाको वैज्ञानिक तथ्यबारे थाहा छ तपाईंलाई ? – Jagaran Nepal
चुरा लगाउँदाको वैज्ञानिक तथ्यबारे थाहा छ तपाईंलाई ?
आयुर्वेदका अनुसार सुन चाँदीले शरीरलाई बल प्रदान गर्छ । सुन चाँदीको घर्षणमार्फत् शरीरले शक्तिशाली तत्व प्राप्त गर्छ जसमार्फत् महिलाको स्वास्थ्यमा लाभ मिल्छ र उनीहरु धेरै उमेरसम्म स्वस्थ हुनसक्छन् ।अर्को एक मान्यताका अनुसार महिला जब घरको काम गर्छन् तब चुराको आवाजले घरको नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गर्ने गर्छ । सकारात्मकता बढ्छ । धार्मिक मान्यताका अनुसार जो विवाहित महिलाले चुरा लगाउँछन् उनीहरुको श्रीमानको आयु लामो हुन्छ । यसै कारण विवाहित महिलाका लागि चुरा लगाउनु अनिवार्य छ ।
यस्तै विज्ञानका अनुसार काँचको चुराको आवाजले वातावरणमा भएको नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हुन्छ र सकारातमक ऊर्जाको संचार हुन्छ ।